abalandeli abaningi khumbula Bihter Turkish TV uchungechunge "Uthando Forbidden", eyadlalwa inkanyezi ebukekayo Beren Saat. amantombazane Filmography kuhlanganisa nezinye ukhombise impilo ifilimu amaphrojekthi ezidume emazweni amaningi. Akumangazi ukuthi omunye ikhokhwe eliphakeme ifilimu izinkanyezi Turkey, njalo ziphoqa njengomdlali waseshashalazini. Yini ukubheka nge Beren?
Lo mlingisi yazalwa ngo-1984, endaweni lokuzalwa wakhe baba Ankara. UYise Beren Saat kuyinto umsubathi ophumelelayo Turkish, kodwa intombazane luqobo kuye wayengakaze abonise isithakazelo esitheni ngalo mdlalo. Ngemva kokuphothula ePhakeme College edolobheni lakubo eminyakeni embalwa yena Uqondile art abaphathi bakwa Bikent University. Kodwa akulona umsebenzi umphathi kwaba umgomo wakhe.
Beren Saat, Filmography njengamanje siqukethe amafilimu angu-10 aphumelele futhi uchungechunge TV, kancane kancane kwangikhanyela isifiso ukuba umdlali waseshashalazini. Nakuba usengumfundi, waba umuntu ongenele umncintiswano angase show "Izinkanyezi Turkish", wathola indawo yesibili ezingalindelekile. Ukunqoba alethwe inkanyezi hhayi kuphela ihlombe izethameli, kodwa futhi sipho ukuzama isandla sakhe ngendlela indima encane telenovela. Nokho, ukudlala mini-uchungechunge "Romance of Death" akazange wayiletha udumo, wasiza zidonse ukunaka kwanoma abenzi mafilimu.
Ngu 2015, actress wakwazi inkanyezi amaningana yimpumelelo ifilimu imikhiqizo, kodwa kulolu chungechunge wenza inkanyezi Beren Saat. Filmography wakhe ngo-2008 atholwe indima yokuqala evelele ukuthi wanika abalandeli bakhe abaningi. Abaningi intombazane namanje elihlobene ne Bihter ukuthi ukudlalwa "Uthando Forbidden". umlingani wakhe kwaba Kıvanç Tatlıtuğ, eyaziwa ngokuthi i- "Turkish-Brad Pitt."
Ntombazane encane ophoqelelwe ukushada nomuntu engathandwa ngubani kabili iminyaka yakhe yobudala, yahlatshwa uthandana handsome umshana abasha yomyeni wakhe - uhlamvu kabani indima ochungechungeni kuthatha Beren Saat. izinkanyezi Filmography esikhathini esizayo agcwaliswa eziningana okukhulu iphrojekthi i-TV, kodwa akekho kubo kwadingeka umphumela onjalo. Akumangazi ukuthi uhlamvu wakhe lakhunjulwa ukuba izibukeli, abahlala emazweni amaningi emhlabeni wonke.
Isithombe ethulwa Bihter Izıthwebulo Award "Golden Butterfly", okuyinto ingenye imiklomelo yayinodumo kakhulu kunabo Turkish.
Iqhaza yesiteleka kakhulu
"Uthando Kwenqatshelwe" - akuyona iphrojekthi kuphela lapho iqhaza actress Beren Saat. izinkanyezi Filmography ngo-2010 agcwaliswa telenovela "Guilty Ngaphandle Yecala", futhi abantu basabela ngezindlela omkhulu. Heroine Ezazimzungezile - intombazane evamile Turkish kusuka edolobhaneni, okuyinto aphathwa ngobudlova. Uchungechunge kuphakamisa izimpikiswano ngokuphathelene lokufaneleka eTurkey yesimanje.
Uchungechunge oluthi "Revenge", eyakhishwa ngo-2013, ekubeni omunye telenovela uphumelele "piggy bank" Beren Saat. Filmography, Starring inkanyezi wasondela isimo omunye kakhulu kakhulu-Turkish ifilimu izinkanyezi kakade esikhungweni abezindaba ukunakwa. Uzungu wephrojekthi "Revenge" lathathwa eponymous American ithelevishini umkhiqizo. Uhlamvu main - uyintombi, ngenhloso ukuze axazulule nge isitha iminyaka kokufa kukayise wakhe amthandayo.
Ngokushesha, ababukeli uzokwazi ukubona actress kwenye uchungechunge emikhulu. Lena "Kösem Sultan", lapho yena uyothatha indima wake waphila abadumile. Amazing isiphetho uhlamvu wakhe kwenza umbono Amazing. NgesiGreki Anastasia ephethwe ekhuphukela isancinza disenfranchised Ahmed Okokuqala ukuze ezinamandla Valide Sultan.
Beren Saat udlala hhayi kuphela e telenovelas. Ngokwesibonelo, kuyaphawuleka ifilimu "Rhino Season", adalwe umqondisi Iran. Partner of actress befilimu kwaba Monica Bellucci. Uzungu tape, eyakhululwa ngo-2012, lumayelana uthando edabukisayo imbongi Sahel futhi intombazane Mina. umbhangqwana othandanayo aye ahlukaniswa iminyaka engu-amathathu.
Isithombe "Umhlaba wami", wadutshulwa 2013 - enye ifilimu elikhanyayo, okuyinto aluthola "ukuqoqa" Beren Saat Filmography. Uhlaka photo ingabukwa ngezansi. Lo mlingisi odlala intombazane ukuthi ukugula okungathí sina bancishwa ukuzwa futhi umbono. Nokho, ngeke siyeke, kunzima ukufunda futhi uzama ukuthola indawo yayo emhlabeni.
Kumele ufunde futhi zakhululwa 2009. Le filimu "Ubuhlungu of Autumn", okuyinto nakho kufeza Beren Saat. Isithombe muhle hhayi kuphela indaba ethakazelisayo ukusebenza abanamakhono abadlali. Inikeza ababukeli ithuba siqonde kangcono ukuphila kwawo ngokuqondene nezombusazwe Turkey yesimanje.
Beren Saat uyaqhubeka ukwenza, ngakho-ke, akakude izindima zayo ezintsha yimpumelelo.
Sun Princess 3 * (Marmaris, Turkey): incazelo ehhotela, kanye nokubuyekeza